AUTO [ अटो ]
टीभीएसले ल्यायो आईक्युब इलेक्ट्रिक स्कुटरको अपडेटेड संस्करण, तीन भेरियन्टमा पाइने, मुल्य कति?
बिजमाण्डू May 18, 2022 8:11 PM
काठमाडौं। टीभीएसले आफ्नो आईक्युब इलेक्ट्रिक स्कुटरको २०२२ का लागि अपडेटेड संस्करण सार्वजनिक गरेको छ। भारतीय टु-ह्विलर ब्रान्ड टीभीएसले यस स्कुटरको लाइनअपमा दुई नयाँ भेरियन्ट (एस र एसटी) थपेको छ।
यससहित अब यो विद्युतीय स्कुटरको नयाँ भर्सनलाई आइक्यूव, आइक्यूव एस र आइक्यूव एसटीगरी तीन भेरियन्टमा
तेलको मूल्यवृद्धिलाई प्रतिस्थापन गर्ने यस्ता छन् नेपालमा उपलब्ध इलेक्ट्रिक स्कुटर र बाइकहरु
शुक्र गिरी/बिजमाण्डू May 18, 2022 3:52 PM
काठमाडौं। पेट्रोल लगातार महँगिदै लिटरको १७० रुपैयाँ पुग्यो। सहरी ट्राफिकमा मोटरसाइकल-स्कुटरले ५०/५५ किलोमिटरभन्दा बढी माइलेज दिँदैनन्। अब इन्धन महँगिदा खर्च बढ्यो।
अब इलेक्ट्रिक बाइक कुदाउनुपर्ला भन्नेका लागि नेपाली बजारमा थरी थरीका मोडल उपलब्ध छन्। एकपटक फुल चार्ज गर्दा
समयको माग इभीमा पुग्यो, सरकार भने सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीकरण गर्न अघि बढेन
बिजमाण्डू May 18, 2022 3:33 PM
काठमाडौं। संसारभर विद्युतीय सवारीको माग बढ्दा तयारी गर्नेमा नेपाल पछाडि छैन। तर, सरकारले थालेको काम पुरा गरेन। विद्युतीय बस र ट्याक्सीमा लगानी फसेको त छँदैछ, ती साधन प्रयोगमै नआइ थोत्रिने क्रममा छन्।
राष्ट्र संघको एउटा इकाइसँग मिलेर काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा
यस्तो हुनेछ अब आउने बजाजका दुई नयाँ पल्सर, १५० र १६० सिसिका मोडल परीक्षण
बिजमाण्डू May 18, 2022 12:00 AM
काठमाडौं। बजाजले नयाँ जेनेरेशन पल्सर सिरिजमा नयाँ पल्सर १५० र १६० सिसि मोडल ल्याउने भएको छ। कम्पनीले भर्खरै पल्सर १५० र पल्सर एनएस १६० सिसिको नयाँ जेनेरेशन मोडल परीक्षण गरेको छ।
परीक्षणमा देखिएका यी दुबै मोडल नयाँ जेनेरेशन पल्सर २५०
इन्ट्री लेभलको कारमा नेपालमा तहल्का पिटेको हुन्डाई स्यान्ट्रोको उत्पादन बन्द, यस्तो छ कारण
बिजमाण्डू May 17, 2022 3:25 PM
काठमाडौं। हुन्डाईले तमिलनाडु प्लान्टमा इन्ट्री-लेभल स्यान्ट्रोको उत्पादन बन्द गरेको छ। स्यान्ट्रो त्यो कार हो जसले कोरियाली कार निर्मातालाई सन् १९९८ मा भारतीय ग्राहकका लागि प्रस्तुत गरेको थियो।
यसको पहिलो जेनरेशन मोडल २०१४ सम्म बिक्रीमा थियो। ठूलो ब्रान्डको सम्झनालाई उद्धृत गर्दै हुण्डाईले
युक्रेन आक्रमणपछि रुसबाट बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु धमाधम छाड्दै, रेनोले पनि बेच्यो आफ्नो सेयर
बिजमाण्डू May 17, 2022 11:40 AM
काठमाडौं। युक्रेन युद्धका कारण रसियाले रेनोको मस्को प्लान्टलाई राष्ट्रियकरण गरेको छ। रेनोले रुसी कार निर्माता कम्पनी अभ्टोभाज अधिकांश सेयर बेच्ने घोषणा गरेसँगै रुसले रेनोको मस्को प्लान्ट राष्ट्रियकरण गरेको हो।
रेनोको स्वामित्वमा रहेको मस्कोको कारखानाले रेनो डस्टर, कप्तुर, अर्काना र निसान
निसानको दोस्रो इभी 'निसान आरिया' बजारमा आउँदै, फुल चार्जमा माइलेज कति दिन्छ?
बिजमाण्डू May 17, 2022 12:00 AM
काठमाडौं। निसान लिफ सार्वजनिक गरेको १२ वर्षपछि निसानले आफ्नो दोस्रो नयाँ इभी 'निसान आरिया' बजारमा ल्याउने निश्चित भएको छ। यसअघि निसानले सन् २०१० को डिसेम्बरमा आफ्नो पहिलो इलेक्ट्रिक कार निसान लिफ सार्वजनिक गरेको थियो।
निसानको इभी आरियालाई कम्पनीले नवीनतम कनेक्टिभिटी टेक्नोलोजीले
फोर्डका ५३ हजार गाडी फ्याक्ट्री यार्डमै रोकिए, चिप अभावले तयार भएर बजारमा जान पाएन
काठमाडौं। फोर्डले उत्पादन गरेका ५३ हजार गाडीहरु चिप अभावका कारण बजारमा जानबाट रोकिएको छ। फोर्डका विश्वभर रहेका फ्याक्ट्रीहरुका यार्डमा ती गाडीहरु थन्किएका हुन्।
विश्लेषकहरूसँगको पछिल्लो छलफलका क्रममा कम्पनीका प्रमुख वित्तीय अधिकारी जोन ललेरले चिप अभावका कारण फोर्डले उत्पादन गरेर तयार भइसकेका ती
बिजमाण्डू May 16, 2022 8:12 PM
यो प्लान्टबाट मारुती सुजुकीको पहिलो
अवैध आयातको चेपुवामा सवारी स्पेयर पार्ट्स व्यापार, 'सरकारले अर्बौं घाटा हुँदा पनि रोकेन'
शुक्र गिरी/बिजमाण्डू May 16, 2022 5:11 PM
काठमाडौं। अटोमोबाइलको स्पेयर पार्टस् व्यापारमा सरकारको नीतिले कालोबजारीलाई प्रशय मिलेको व्यवसायीहरुले आरोप लगाएका छन्। सरकारकै कारण नेपालमा स्पेयर्स पार्ट्सको व्यापारमा कालोबजारी बढ्दै गएको भनाइ उनीहरुको छ।
भारतसँग खुला सीमा रहेकाले अवैध आयात निरुत्साहित गर्न सरकारले सीमामा कडाइ
VIEW ALL NEWS FROM AUTO